Irmak Zonguldak Umnxeba ovulekileyo weSitayile kunye neBelt Drainage | RayHaber
ikhayayemnyama.IifandesiIINKCUKACHA ZEZITHILIVula i-Channel kunye ne-Belt Drainage kwi-Irmak Zonguldak Line
Vula i-Channel kunye ne-Belt Drainage kwi-Irmak Zonguldak Line
20 / 11 / 2019 IINKCUKACHA ZEZITHILI, yemnyama.Iifandesi
ukuntywila kumjelo ovulekileyo kunye nebhanti kumgca we-zonguldak
Irmak Zonguldak Line Km: 382 + 300 'ukuya ngasekunene komgca kwisitayile esivulekileyo kunye nomjelo wamabhanti ukuba wenziwe ngenxa yethenda.
Iindlela zaseTurkey. Umlawuli weNkonzo yokuThengwa kweMimandla (i-TCDD) i-2 / 2019 enexabiso le-548996 TL kunye neendleko eziqinisekileyo ze-92.236,33 TL yi-Irmak - Zonguldak Line Km: 123.005,02 + 382. kunye ÜMİT ÇAĞLAR ÖZCAN iphumelele ithenda nge 300 TL ibhidi.
Ithenda igubungela iitoni ze-8,05 Ø 8- Ø 12 mm yentsimbi ekhonkrithi yentsimbi, ukusika, ukugoba nokutshintshwa kwebar (kubandakanya ezothutho) neminye imisebenzi. Ixesha lomsebenzi ziintsuku zekhalenda ze90 (amashumi asithoba) ukusuka kwindawo kuhanjiswa.
Isaziso seThenda: Irmak-Zonguldak Line Karabük-Çankırı…
Isaziso seThenda: Umntu ophethe ibhola kwi-Irmak-Zonguldak Line
Ukuma kwe-UTİKAD kutsala umdla omkhulu kwiLogitrans Fair
Namhlanje kwiMbali: 21 Novemba 1927 Havza-Amasya-Samsun umgca